entrepreneur yimpumelelo futhi sikahulumeni Gref German Oskarovich, ogama Biography - isibonelo sokuzimisela kanye ukuvelela, yide indlela futhi izuzwe eziphakeme abalulekile. umlingisi lakhe impikiswano, kodwa yinye into eqinisekile - he is a professional wezinga eliphakeme kakhulu.
Gref German Oskarovich, ogama biography iqala 8 Februwari 1964 edolobhaneni elincane Panfilovo, Pavlodar esifundeni Kazakh Union Republic, wachitha esengumntwana emzini Irtysh. umndeni Gref ukuthi dengwane amaJalimane. Bathuthela eSifundazweni Kazakhstan kusukela Donbass ngo-1941. Ubaba Herman, Oscar F., wasebenza wobunjiniyela, unina, u-Emilia Filip kwaba uchetchitsey ke oyisazi sezomnotho. Lapho umahluleli omncane kunabo bonke emkhayeni eJalimane wayeneminyaka engamashumi 1.5, i-inhloko yomkhaya wabulawa, futhi ekhulisa izingane ezintathu, umama wasiza ugogo. Umfana wakhula lithambe nokuzola, waqikelela kakhulu nokukhathalela yonke into eziyibonayo.
Isikole-German wayengumfundi okhuthele, kodwa ngaphandle isicwebezelisi. Othisha bamkhumbule bathi kahle ukuthi lokhu kwakuhluke purposefulness nokubekezela. Ngibuya esikoleni, wayenginikeza abafikanga sikhungo, futhi ngokushesha baqala ukusebenza Umeluleki Agricultural emzini. Ngo-1982, Gref uya empini ngemva kokudonsa iminyaka engu-2 Phakathi Nezwe Umbutho, akabe abuyele ezweni lakhe waya Omsk, lapho engena State University, Faculty of Law. Kuyo yonke le minyaka lokufundisa Gref lutho ekhethekile avelele, wamfuna ngenkuthalo futhi kahle ifundelwe futhi wathola idigri kwi "Jurisprudence" ngo-1990.
Ngemva kokuthweswa iziqu Gref German Oskarovich, ogama biography Kumiswa kuyinto ngempela ejwayelekile abantu baseSoviet, ofundiswa inyuvesi ekhaya. Omsk sikhathi sokuphila kwesokunxele kancane ekuphileni Gref noluncane. Sicabanga ngalokhu othisha, ofunda nabo kanye nozakwabo njengoba insizwa ngenkuthalo zokuhaha. Phakathi nezifundo kwakhe ejele iqembu a Komsomol umholi weqembu op yomfundi abalondoloza oda enziwa izindawo zokulala. Yena wayengumfundi okhuthele futhi wakwazi ukwakha ubuhlobo. Dean yoMthetho Faculty of Sergei Baburin wayemsekela kakhulu Gref futhi kamuva waba nendima ekuphileni kwakhe.
Lapho befundisa German in Omsk bengingekho ngasekupheleni, kusukela ngo-1990 wangena iziqu esikoleni. Lokhu kwaba indlela ejwayelekile, uma umuntu wayefuna ukusebenza esikoleni esiphakeme, kwadingeka azivikele, kuyabiza ngakho futhi zayiswa Gref.
Ngo-1990, umnikazi esizayo enquma iqhubeke nesifundo sayo, bese washintsha ngokuphelele ukuphila kwakhe. Gref German ifika iziqu esikoleni e-University of Leningrad, umphathi walo ngesiphakamiso umphathi Law Faculty of University of Omsk N. Baburin baba Anatoly Sobchak, kodwa kwavele kwaba yize umcimbi yokuphila-zokushintshela Gref. Sobchak oko imeya enhlokodolobha enyakatho futhi wabona intokazi iziqu umfundi e okusezingeni eliphezulu esikhundleni sokuphatha. Anatoliy Aleksandrovich kwaba umsekeli izinguquko wayefuna nesimanje sezombusazwe edolobheni kanye nezwe, futhi ngempela le umbimbi okuqhubekayo, futhi Gref kwaba endaweni efanele. German kuqala lesisihlabelelo Iseluleko kukomidi koMnotho impahla, kodwa ngemva konyaka waba yinhloko yaleli komiti. Ngo-1994, Gref wahola umnyango ingcebo, futhi ngo-1997 eneminyaka engu-Vice-Governor, Usihlalo Petersburg State Property Management Committee edolobheni.
Lokhu umsebenzi umxhwele Gref owenza sibonga ubuhlobo obuhle Sobchak, kodwa ngaphezu kwalokho, kule nkathi, uthola eningi ukuphola ewusizo futhi ethembisa kakhulu: uVladimir Putin, u-Alexei Kudrin, Dmitry Medvedev Dmitry Kozak - bona wonke umsebenzi ndawonye ekuphathweni Petersburg . Futhi lapho Sobchak limukile, Gref bokushesha ngezinyawo zakhe, nakuba mqondo yakhe ngesikhathi ayikwazanga amvikele.
Phakathi nale nkathi, Mr Gref iba yilungu amabhodi labaqondisi izinkampani eziningi ezinkulu kuleli dolobha, "Lenenergo", "Sea Port of Saint-Petersburg", Channel 5 ku-TV.
umsebenzi Gref e ukuphathwa kwempahla kubange sesifufula sokugxekwa ukuphikiswa, yena wamangalelwa ngokuthi waba ukwanda okukhulu kwezincwadi izimali nezezindlu, azimele ngokungemthetho izindawo zomlando edolobheni, ukwehluleka kabusha izindlu. Kodwa konke lokhu akuzange kuvimbele ngokuqinisekile Gref akhuphuke. '
Ngo-1998, Gref eba yilungu lebhodi Ministry Russian komhiaba Ngakho wathutha eMoscow. Futhi cishe ngaso leso sikhathi ngamiswa Lisekela leNdvuna Okokuqala Impahla Yombuso we Russian Federation, ukusekelwa ayenakho Anatoly Chubais. Ngonyaka olandelayo, Gref umsebenzi ophezulu, nalapho eyilungu yoMkhandlu nezoMnotho Yemfihlo Regional, panel abamele uhulumeni waseRussia e OJSC "Svyazinvest" futhi "Rosgosstrakh", kuyingxenye ibhodi labaqondisi "Aeroflot", "Gazprom" futhi "Sibneft ". Wamiswa ikhanda ikhomishana uhulumeni ukuqinisekisa imisebenzi FSND.
Ngo-2000, Gref uba inhloko Centre for Strategic Studies ngaphansi uhulumeni waseRussia. He is an sibalo ebalulekile Bloc kwezomnotho uhulumeni WaseRussia, futhi isikhundla salo kuphela ukuqiniswa.
Ngemva kokunqoba of Vladimir Putin in 2000 in the Russian Federation Urhulumende uNgqongqoshe omusha wezokuThuthukiswa koMnotho kanye yezokuhwebelana kanye umuntu omusha - Gref German Oskarovich. Biography (ngubani Gref isiJalimane, babebaningi ezithakazelisayo) wenza round esisha. umlingisi wakhe wadumazeka kancane eyaziwa umphakathi, futhi ukubonakala kwawo kwabangela abanye ukudideka kanye nesikhathi izingqinamba. "Gref German Oskarovich - ngubani?" - okokuqala wabuza izintatheli, kodwa izinto zashintsha ngokushesha.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho uphokophele nethimba ukuthuthukisa isu tekutfutfukisa talelive kuze 2004. Ngo-June, Gref akhethwe ilungu "UES Russia" eBhodini Labaqondisi ngoJulayi, wamiswa umphathi we uhulumeni waseRussia e -European Bank neKwakha kaBusha nekuTfutfukisa. Umsebenzi oyinhloko, owawungumnyaka ukunquma kokuthunyelwe kaNgqongqoshe Gref - iyona izingxoxo ukubusa waseRussia kwe-World Trade Organization. Izingxoxo akulula, isingeniso njalo lihlehliselwe kusukela izwe ukunikela kwezimo ezingezinhle, bayoba igcwaliswe kuphela ngo-2011. Nokho, Gref wakwazi ukwenza izivumelwano obuhle yonke imibuso yezwe.
Ngo-2004, zonke uhulumeni Mihaila Kasyanova sichithiwe, kodwa Gref German uthola isiphakamiso e iKhabhinethi elisha Mihaila Fradkova. Waphinde waba uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, nakuba nondunankulu omusha akayena ubudlelwane nobungane. Kugcine iminyaka emibili, ngeke zikwazi ukuthi zenze carping mutual nongayithandiyo Fradkov futhi Gref, kuyo yonke imihlangano ye uhulumeni ngaphandle kokuthi ningathinti nomunye. Kodwa kancane kancane ukujwayela khona ngokulinganisa.
Ngo-2006, iKhabhinethi of Izikhonzi uyokwamukela kufanele angenele uhlelo lokuthuthukiswa iminyaka engu-2, akhiwa Office Gref. Lolu hlelo yisibonelo ochwepheshe ngokuthi i ebucayini okungavamile phakathi Gref, Fradkov futhi Kudrin. Gref wakwazi ukuxoxisana nozakwethu wokubuyelela kabili GDP eminyakeni engu-10 ezayo futhi kunganciphisa izinga VAT 13%. Phakathi nale nkathi, Gref ubonisa ayekufezile ithalente umlamuli kanye nekhono ukuthola ukusilela ngisho nasezimweni ezinzima kakhulu. Ngenxa yekhono lakhe nokusekelwa ukuqhubeka ngoba Putin, wakwazi ukuhlala kule post kaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho ngesikhathi premieres ezinhlanu. Ngesikhathi esifanayo Gref bekulokhu le-oshisekayo umnotho emakethe futhi liberalism.
Ngo-2007, Fradkov wesulile esikhundleni sakhe, kodwa iKhabhinethi uyaqhubeka enza okwesikhashana imisebenzi yakhe isikhashana. Futhi ngo-September 2007, lo omusha uNdunankulu Zubkov uqoka izikhonzi ezintsha, indawo Gref iza Elvira Nabiullina ubesebenza njengodokotela nephini lakhe lokuqala. A-German Oskarovich elinde entsha, ezithembisa aphoyintimenti.
Udaba zokuphila - Google
Ngo-2007, Gref German Oskarovich, ogama biography uyaphinda okwenza ukujika, uthola isikhundla esisha. Russian Sberbank Supervisory iBhodi lihlongoza candidacy yakhe kokuthunyelwe kalowo nosihlalo yasebhange main wezwe. German Gref (Sberbank biography izahluko kusukela manje kushintsha kakhulu) ithatha umthwalo omkhulu futhi uqala kusebenta ngekukhutsala emkhakheni omusha. umsebenzi wakhe, wabona kudalwa ebhange iklayenti ngamakhasimende.
Gref wanquma ukuqala nokwanda kwentshiseko sina ezingeni kwabasebenzi. On sicabangela ehhovisi, uthe ngeke ubambe izinguquko, kodwa namanje ambalwa abameleli echelons ephakeme ka ukuphathwa bafaka incwadi yokusula, ezinye izisebenzi waxoshwa ngemva kokutshela kokuhlaziywa yangaphakathi.
Waqala umsebenzi ngcono ukuhlinzekwa abolekise okudayisa, wanda isibalo amasevisi anikezwa nge-Inthanethi, usanda kwethula lento elula amasevisi ebhenki online, wakwazi ukubandakanya bakamalalahlengezela impesheni lisetshenziswa wesikweletu.
Futhi, izinguquko eziphawulekayo ziye zathinta ngosiko lesikhungo. Yena umkhankaso rebranding eqolo ukushintsha isimo sokucabanga ebhange amakhasimende ayo ezingaba khona. Lokhu Gref iye yabangela thuthuva abaningi njengoba zineminyaka esibucayi ezweni, futhi wachitha imali nokukhangisa. Yena ophoqelelwe abaphathi ukuya ejimini, emuva ekuphileni Sberbankiada isiko kanye ngezinga elikhulu labetibambile izenzakalo ezihlukahlukene yenkampani. Ngakho, unyaka lidlule ezinkulu naphakathi Savings Bank amaholide okungenani ezinhlanu: New Year, Day Valentine sika, 8 Mashi, umcimbi lokuzalwa futhi "Sberbank yamakhono", okusho wachitha tibalo eside.
Iminyaka 8 komsebenzi Gref yasebhange, wakwazi ukufinyelela eziningi okuhloswe, kodwa isithombe Savings Bank ezweni ikakhulukazi uhlala evumayo kakhulu, ikakhulukazi ngenxa ikhwalithi embi amahhovisi ezifunda inkonzo. Ngo-May 2015 umhlangano jikelele bamasheya Savings Bank asinike isivumelwano Gref kuze 2019.
Gref German Oskarovich (Biography of the umnikazi, njengoba ungabona, ngendlela emangalisayo yimpumelelo) iyisibonelo kanjani ukuhlanganisa inkonzo yomphakathi nebhizinisi yangasese. Kuyo yonke le minyaka futhi luye lwaqinisa usayizi esigxotsheni yayo Sberbank kusukela 0,0007 ukuba 0,003%, wakwazi ukuba abe ilungu amabhodi izinkampani ezinkulu eziningana, kuhlanganise inkampani Inthanethi "Yandex".
Gref German Oskarovich, biography kabani iDemo limchaza ngokuyinhloko njengoba inhloko yabangamashumi Savings Bank, ababeshisekela ngenkuthalo wagxeka. Usolwa ukuthi isebenzisa izimali ebhange izidingo zomuntu siqu nezibopho zemikhaya, ukuthi ayibekele ngokwaso amaholo emangalisayo omkhulu futhi amabhonasi. Bank of isihlamba ngenxa izimo uhlupho olukhulu kuhulumeni we mortgage eqolo zenzalo loans kanye imali. Gref mathupha kwabalelwa ukuthi ophoqelelwe ejensi kahulumeni ukusebenza ukukhokhela izisebenzi kuphela ngokusebenzisa Savings Bank, kanye ukwephulwa eziningi, ukungazi nepotism. Ngakho, yonke Savings Bank Amaholide ophethe inkampani, abasebenzi Gref nomshana, izihlobo ukuthola imali-mboleko yendlu ngemibandela oyithandayo, nokunye. P. Doesnt wasabela kanjani lapho emangalelwa umnikazi, futhi lokhu kwenza nabo asihlobene.
Honours kanye nemiklomelo
Ukuze inkonzo kunoma yiliphi izwe uvuza izakhamuzi zawo, futhi isibonelo salokhu - German Oskarovich Gref. Russia uyakwazi ukubonga amadodana ami, futhi ukuphila esebenza ebhange ingaphezu abalulekile. Kuyo yonke le minyaka, uhulumeni kanye yasebhange main Gref wezwe waklonyeliswa kabili Order "Ukuze Merit", kanye Order of Honour, le Aleksandra Nevskogo, oNgcwele Prince Daniel eMoscow, amadiploma ngabonga uMongameli Russian Federation indondo P. A. Stolypina. Kanti futhi uphinde abe Knight ka iButho Ukuhlonishwa France, isakhamuzi zokuhlonipha ka-Astrakhan futhi ePeterhof.
Gref German Oskarovich, biography ephelele ehlanganisa page angaphezu kwelilodwa, kuthatha liyindawo efanelekayo phakathi izakhamuzi ahlonishwe of Russia yesimanje.
Phakathi impumelelo yakhe zihlanganisa PhD e Economics, ayamukela nge ukubhala "Development namathemba yezinguquko kwesakhiwo yesikhungo emnothweni Russian."
Ukhuluma in the press
Gref German Oskarovich, biography bese ucindezela-portrait ugcwele amaqiniso efana uphawu futhi uphawu lokususa, livamile ukukhuluma ngazo izincwadi. Wayevame kwenza izitatimende sihlobene nezenzakalo ezibalulekile ngo-Savings Bank, kanye amazwana izindaba kusukela umnotho. Baningi umsindo akwenzile Enkulumweni yakhe engqungqutheleni yisithangami kwezomnotho Petersburg ngo-2012, lapho, wathi wayeyinkosi bayazesaba umqondo ukudluliswa kwamandla ezandleni zomphakathi njengoba ukugcwalisa izifiso zonke kungenzeki, nokuthi abantu abavamile akufanele babe nolwazi njengoba ke ngeke ukulawula. Kuningi yabezindaba wabhala mayelana Enkulumweni yakhe engqungqutheleni Exchange Forum 2015, lapho wagxeka lezomnotho soMthetho woHulumeni futhi ubize azimele omusha, ikakhulukazi, ukuthengisa ingxenye ukwabelana Sberbank.
I cindezela ukuphikiswa uthanda sisole abamele izinhlangano pro-uhulumeni, futhi ngaso sonke isikhathi abe target enkulu - Gref German Oskarovich. Esilingweni (Biography of the umnikazi ngaphandle kwenkokhiso) ngokuvamile livela ku-intanethi futhi abezindaba. Usolwa ngokungabi bikho iphrofayli kwezomnotho wezemfundo, nokuntuleka mayelana abasebenzi, wabhala ukuthi ukuthethisa abasebenzi, bawaletha ku izinyembezi, wayengumuntu zidla futhi uyaphindisela. Yingakho, ngokuvumelana cindezela, ngemuva kokufika Sberbank German Gref ushiye iningi ochwepheshe abaphezulu.
Intandokazi isihloko cindezela ophuzi - ukwephula eminingi ekubambeni izimali Petersburg ngesikhathi Gref yokuphila, futhi ngisho noma ababekwa amacala ngokuba nesandla MANEVICH ukufa. Zonke lezi amacala engaphenduliwe yi umnikazi, akabe wayiziba, kodwa umane indiva.
Gref German Oskarovich, biography, ukuphila siqu unesithakazelo abezindaba kanye nomphakathi okokuqala washada ngemva nje kokuqeda isikole esiphakeme. Umkayo wayesesibhedlela lo mfundi Elena Velikanova, ubuhle ayibonwa. Eminyakeni engu-18, Gref kwakuyinqubo okwase kuyiminyaka umbuso uyise, lo mbhangqwana kwadingeka indodana, u-Oleg, manje ubani behileleke nakwezamabhizinisi. Uyise wamnika ezinhlanu endlini enamakamelo yokulinganisa 250 square metres. Lapho eshadisa abantu bokuqala bakwazi ukusinda nensizakalo ibutho lamaJalimane, kanti izifundo ayezenza in Omsk. ELeningrad Gref uthatha umkakhe naye, kodwa uchitha isikhathi kancane naye njengoba inkanuko benza umsebenzi, umshado, futhi ekugcineni disintegrates. Kodwa kamuva umkakhe othenga indawo amakamelo amahlanu ku Malaya Bronnaya Street e Moscow, Gref German. Biography, umkakhe nomkhaya wakhe njalo ngaphansi iso a baxgeki ebona inqubomgomo yezezimali isimo.
Gref futhi sashada ngo-2004. Wedding ePeterhof Room Throne, senza umsindo, njengoba izakhamizi uthukuthele Petersburg wazibuza ukuthi olusemthethweni nesizotha angakwazi ukukhokhela iholide lokhu ezidlula. unkosikazi wesibili Gref Jana waziphatha design. Ngo-2006, lo mbhangqwana waba indodakazi ngo-2008 - yesibili. ngezilimi okubi bathi izingane wayevela umama ngokwesivumelwano. Kodwa ubufakazi semibono enjalo alikho. Gref German Oskarovich, biography, imbangela enenkosikazi ilukuluku phakathi amaRashiya amaningi, alisho lutho amahebezi nje baphile izimpilo zabo.
Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila Herman Gref
indlu zomndeni e Graefe nazo zonke izingane ezintathu ukukhuluma isiJalimane esikoleni - ngesiRashiya, isiJalimane kanye ukhuluma lezi zilimi kahle.
Gref liyaziwa Antics yakhe ome njengeqanda: esho suit ezinkampani hussar ipera emhlomphe lena kwaba okumhlophe futhi waqala ukudansa tango (ukubheka yesehlakalo ngempumelelo, ayeyisebenzela ngenyanga nge uthisha wase-Argentina).
Ngo-2013, umagazini i-Forbes bambuyisela endaweni yesihlanu ohlwini abaphathi eqolo isiRashiya, umholo wakhe kwakulinganiselwa ku $ 15 million.
Miranda Hart: izinyathelo kuqala enkazimulweni
Flu: Umkhuhlane izinhlobo, izimpawu, ukwelashwa, zokuvimbela
Kungani iphupho izimonyo: nokuchazwa imibono
Uchungechunge oluthi "Kwakuwusuku icala ku Kuban": nabalingisi nendima eyadlalwa kubo